ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူများ အတွ က် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်)ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ | CeleTrend
ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူများ အတွ က် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်)ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
30-5-2020ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများသိရှိစေရန် (2020-ဥပဒေသစ်)ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က) ။ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ #အခြားနံပါတ်တပ် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်=ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ =ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။
အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း.ထောင် တစ်လ။ #မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ =ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း .ထောင် တစ်လ ။ #တခြားသူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ ။ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း . ထောင် တစ်လ။ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-င)၊ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း.ထောင်တစ်လ ။ #မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက်မူးလွန်းမောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ =ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း .ထောင်တစ်လ #မောင်းလိုင်စင်မပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-က)။
အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းလွန် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ- ၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။မီးပိုတပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဆ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ =ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း ။ #ယာဉ်မောင်းစဉ်ဖုန်းအသုံးပြု =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဋ) ။အရေးယူသည့်ပုဒ်-၈၆ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။
#ဘက်မှန်မပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇=ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ ရှေ့မီးအနိမ့်နေ့/ညဖွင့်မောင်းရန်ပျက်ကွက် =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း ။ပါဝါအိတ်ဇောအသံထိန်းမပါ =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ =ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း ။ #ဦးထုပ်မဆောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ဂ)။ အရေးယုသည့်ပုဒ်မ ၈၇= ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း တို့ဖြစ်သည်။သိထားတော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နားလည်ထားတာပေါ့၊စေတနာဖြင့်အသိပေး၏
30-5-2020ဆိုငျကယျစီးမောငျးနှငျသူမြားသိရှိစရေနျ (2020-ဥပဒသေဈ)ယာဉျနံပါတျမထငျရှား =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-က) ။ အရေးယူသညျ့ ပုဒျမ-၉၄ =ဒဏျငှသေုံးသိနျး. ထောငျ သုံးလ #အခွားနံပါတျတပျ =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၄ =ဒဏျငှေ သုံးသိနျး.ထောငျသုံးလ။ ယာဉျနံပါတျပွားမတပျ=ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၄ =ဒဏျငှသေုံးသိနျး.ထောငျသုံးလ။ဝှီးတကျသကျတမျးကုနျ =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၀)။
အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁ =ဒဏျငှတေဈသိနျး.ထောငျ တဈလ။ #မောငျးလိုငျစငျမရှိ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-က)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁ =ဒဏျငှတေဈသိနျး .ထောငျ တဈလ ။ #တခွားသူ၏ယာဉျမောငျးလိုငျစငျသုံး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁ ။ဒဏျငှတေဈသိနျး . ထောငျ တဈလ။ယာဉျမဆငျမခွငျမောငျး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-င)၊ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၉၁ =ဒဏျငှေ တဈသိနျး.ထောငျတဈလ ။ #မူးယဈဆေးဝါးသုံးအရကျမူးလှနျးမောငျး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-ဇ)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၉၁ =ဒဏျငှေ တဈသိနျး .ထောငျတဈလ #မောငျးလိုငျစငျမပါ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-က)။
အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၈၆ =ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။မောငျးလိုငျစငျသကျတမျးလှနျ =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ- ၈၆ =ဒဏျငှေ သုံးသောငျး ။မီးပိုတပျ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဆ)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၈၆ =ဒဏျငှသေုံးသောငျး ။ #ယာဉျမောငျးစဉျဖုနျးအသုံးပွု =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဋ) ။အရေးယူသညျ့ပုဒျ-၈၆ =ဒဏျငှေ သုံးသောငျး ။
#ဘကျမှနျမပါ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-က)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇=ဒဏျငှေ သုံးသောငျး ။ ရှမေီ့းအနိမျ့နေ့/ညဖှငျ့မောငျးရနျပကျြကှကျ =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-ခ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇ = ဒဏျငှသေုံးသောငျး ။ပါဝါအိတျဇောအသံထိနျးမပါ =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-က)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇ =ဒဏျငှေ သုံးသောငျး ။ #ဦးထုပျမဆောငျး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-ဂ)။ အရေးယုသညျ့ပုဒျမ ၈၇= ဒဏျငှသေုံးသောငျး တို့ဖွဈသညျ။သိထားတော့ဆောငျရနျရှောငျရနျနားလညျထားတာပေါ့၊စတေနာဖွငျ့အသိပေး၏
ပေါင်(၃၀၀)ကျော်တုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ မိုးယုစံရဲ့မောင်လေး ဆန်းလင်းထွန်း
နောက်ထပ် (၂)နှစ် ကြာ ပါမယ်လို့ ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်း ကြတဲ့ ကိုဗစ် (သို့) “သေမင်း မိတ်ဆွေ”